Ụfọdụ igodo eji achọ ụlọ mma | Icho mma
Ụfọdụ igodo eji achọ ụlọ mma
Maria onyekwere | 05/10/2021 10:00 | Uche ezumike
Ụlọ ime ụlọ gị ọ bụ ihe mgbe ochie? Ị zụrụla ụlọ e wuru ọhụrụ na ị maghị ebe ị ga -amalite chọọ ụlọ ahụ mma? Oghere oghere nwere ike ịkarị akarị yabụ anyị chọrọ inyere gị aka site na ịkekọrịta ụfọdụ igodo iji chọọ gị mma.
Kedu ihe kacha mkpa mgbe a na -achọ ụlọ mma? Ezi nkesa bụ isi iji bulie ohere ma kwado mmegharị n'etiti mpaghara dị iche iche, ọ bụrụ na ọ dị. Ma kesaa nkesa ahụ, nke ga -agbanwe ọ bụghị naanị na ụdị ndụ anyị kamakwa bụrụ nke na -adọrọ mmasị ma na -anabata. Kedukwa otu ị ga -esi nweta ihe a niile? Ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ nyochaa mkpịsị ugodi eji achọ ụlọ mma.
1 Na -ekesa oghere nke ọma
2 Chee echiche banyere ụdị
3 Họrọ ụcha agba
4 Dọrọ uche gaa n'isi mgbidi
5 Ejila ọkụ na -enwu ọkụ
Na -ekesa oghere nke ọma
Iji nwee ike ikesa ụlọ ahụ nke ọma ọ dị gị mkpa ịma otu ị ga -esi eji ya. Ị ga -ejikwa ime ụlọ ezumike dị ka ebe iri nri? Ịkwesịrị ịgụnye obere mpaghara ọrụ? Ọ ga -adị mma ka ị nwekwuo oghere nchekwa n'ime ụlọ a? Buru n'uche na na mgbakwunye na ihe niile ịchọrọ, ị ga -ahapụ ohere zuru oke n'etiti arịa ụlọ ka ị nwee ike ịgafe ya nke ọma.
Ụdị ụlọ ahụ nwere ike inyere gị aka ịhọrọ nhazi kacha mma maka ime ụlọ gị. Ụlọ gị ọ bụ akụkụ anọ ma ọ bụ square? N'ime nnukwu ụlọ akụkụ anọ nke a ga-etinyerịrị ihe karịrị otu gburugburu, iji sofa nwere ụdị L ga-enyere gị aka ikewa na ịkwalite ha.
Ịkwesighi ịhapụ sofas nwere ụdị L n'ime oghere oghere, Mana ọ bụrụ na ịmee ya, ihe kwesịrị ime ga -abụ ịkụ nzọ n'akụkụ nkuku. N'ime ụdị oghere a, ọkachasị mgbe ọ pere mpe, ọ ka mma idobe otu sofa ma tinye oche oche ma ọ bụ pouf iji nweta oche. Akwala ohere karịrị akarị maka ịchọ ụlọ mma nke ọma.
Chee echiche banyere ụdị
Ịhọrọ ụdị ahụ na -eme mkpebi niile na -esote ngwa ngwa. Chọgharịa akwụkwọ akụkọ na -achọ mma ma ọ bụ tụfuo onwe gị na Pinterest Ọ ga -abụ mmụọ nsọ ịmara ihe ịchọrọ na ihe ị chọghị. I nwekwara ike ime ya na -ahapụghị ibe anyị. Na Decoora anyị ekerịtala n'ime afọ ndị a igodo ịchọ mma ime ụlọ ime ụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Nordic ma ọ bụ etiti narị afọ. Naanị ị ga -eji igwe ọchụchọ anyị iji nweta echiche.
Ị na -achọ ihe dị mfe? Banyere paragraf a, na foto a, anyị na -egosi gị ime ụlọ nke ụdị dị iche iche ka anya na ngwa ngwa wee chọpụta nke kacha dịrị ihe ị na -achọ. N'ụzọ dị otu a, ị ga -amachi ọchụchọ gị na -esote wee dee igodo ụzọ mbụ maka ime ụlọ gị.
Họrọ ụcha agba
Agba na mgbakwunye inye onyinye na mee ka otu ihe eji achọ mma mma, ga -emetụta imepụta ikuku ụfọdụ. Ị chọrọ ka ọ bụrụ ebe ama ama na izu ike? Ị masịrị ụdị ọgbara ọhụrụ na ọkaibe? Na -achọ ịmepụta oghere okike? Ihe na -erughi otu afọ gara aga, anyị esoro gị kerịta echiche agba iji tee ma chọọ ụlọ obibi mma n'ụdị nke gị. Ànyị ga -agafe ọsọ ọsọ ole na ole?
Agba ọcha na isi awọ: kpochapụwo. Mgbidi ọcha na -arụ ọrụ ha nke ọma n'ime ụlọ nwere ọmarịcha ihe owuwu na ọmarịcha ụlọ, mana ị nwere ike dochie ọcha maka isi awọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, na mgbakwunye na oghere mara mma na nke mara mma, nke na -ewu ewu. Site na arịa ụlọ ọcha na ndo ọla edo ma ọ bụ ojii dabere n'ụdị ịchọrọ ị nweta, ị ga -adị mma mgbe niile.
Osisi na -acha ọcha na ọkụ. Nordic. White bụ agba dị mkpa n'ụdị Nordic n'ihi na ọ na -eme ka ọkụ dị mma. Mana ọ bụghị ihe niile ga -acharịrị, ị nwere ike iji nuances melite oghere ahụ: arịa ụlọ ọkụ ma ọ bụ ngwa na ụda pastel.
Ndị isi ojii na ndị isi awọ gbara ọchịchịrị: dịkọrọ ndụ. Agba ntụ bụ agba ejiji na agba kacha mma iji mepụta oghere ọgbara ọhụrụ. Site na oji, ọ na -abụ ngwakọta agba dị mma iji nweta ụlọ nwere ikuku ọkaibe. Ngwakọta nke ị nwere ike itinye arịa ụlọ na iberibe osisi ma ọ bụ na ụda tan iji nweta ọmarịcha ọkụ na obere nuances nke agba.
Verde: Ọkara Narị Afọ. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kacha dabara nke ọma na ahịrị na etiti ụda nke arịa ụlọ nke Century, na-eme ka ha dị mma maka oghere nwere ikuku ikuku. Iji mezue ha, ị ga -achọ naanị itinye akwa ma ọ bụ ngwa n'ime ụda ọkụ: oroma, terracotta, garnets ...
Yellow na oroma: Ihe okike Na -ekpo ọkụ ma dị mkpa ha bụ ụzọ ọzọ dị egwu iji mepụta oghere na -atọ ọchị na ihe okike. Igosipụta otu arịa ụlọ akọwapụtara site na usoro geometric ma ọ bụ ịhọrọ sofa na agba a ga -eweta ọtụtụ mmadụ n'ime ụlọ ọ bụla. Na mgbakwunye, ha bụ agba na -ejikọ nke ọma na ụda anụnụ anụnụ, ọcha na isi awọ.
Terracotta na ocher: osisi. Ngwakọta agba a na-ekpo ọkụ na-akpọrọ anyị gaa ebe ọzọ. Se ụlọ dị n'ime ụda terracotta bụ ụzọ dị mma iji malite ịmepụta oghere Bohemian ma ọ bụ narị afọ nke oge ị nwere ike mechaa mejupụta arịa ụlọ na osisi osisi, textiles na ocher ụda na ngwa na-acha ọcha.
Dọrọ uche gaa n'isi mgbidi
Ịdọrọ uche gaa n'isi mgbidi bụ nnukwu ihe ịchọ mma. Agba, akwụkwọ ahụaja, ma ọ bụ gbakwunye mkpuchi Nke ahụ na -eme ka ọ pụọ iche na nke a bụ otu n'ime ụzọ a na -ahụkarị iji nweta ya. N'ime ihe mkpuchi ahụ, ndị nke osisi bụ ihe a na -achọ ugbu a, ebe ọ bụ na ha na -enye aka iweta ọkụ na oghere a nke na -abụkarị nke kachasị n'ụlọ.
Wụnye ebe a na -amụnye ọkụ bụ ụzọ ọzọ isi mee ya. Ebe a na -amụnye ọkụ na -anọkarị na -elekọta ọnụ ụlọ ebe a na -edobe arịa ụlọ nke edoziri ka tebụl inyeaka. N'ihi ogologo oge symmetrically n'ihe banyere ekwú ọkụ; taa, ka ọ dị, na ụdị usoro ndị ọzọ, ọ bụghị nke iwu.
Ọ bụ ihe ndị a bụ naanị ihe nwere ike ime ka mgbidi bụrụ ebe etiti ụlọ? Ọbụghị ncha ncha. Enwere nnukwu akụ na ụba dịka ịtụkwasị ihe owuwu nke osisi kwụgburu na -esi, nnukwu eserese, sofa na agba na -enwu gbaa ma ọ bụ setịpụrụ foto ma ọ bụ enyo.
Ejila ọkụ na -enwu ọkụ
Isi ihe ọzọ na -achọ ụlọ mma bụ ọkụ. Ọ na -arụ ọrụ dị mkpa, ọkachasị ndị a ga -eji rụọ ọrụ dị iche iche. Ezigbo n'ime ndị a bụ iji ntụpọ ntụpọ ma ọ bụ nnukwu oriọna etiti na -enye ọkụ n'ozuzu ya ma jikọta nke a na ụdị oriọna ndị ọzọ na -enye anyị ohere inwupụta akụkụ dị iche iche. Ọkụ a ga -enye gị ohere ịdọrọ uche gaa n'akụkụ ma ọ bụ iberibe arịa ụlọ, mepụta ebe kwesịrị ekwesị maka ịgụ ihe ma ọ bụ ịrụ ọrụ wee mepụta oge mmekọrịta chiri anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Oghere » Uche ezumike » Ụfọdụ igodo eji achọ ụlọ mma
5 ezigbo ala maka ụlọ ịsa ahụ
Enyo enyo, ihe eji achọ mma